Dieter Zetsche na-ekwu maka ụgbọ ala Apple | Esi m mac
Mgbe na-ekwu okwu nke ukwuu banyere Apple chere ụgbọ ala oru ngo, na Titan oru ngoDị ka na njedebe ihe niile na-anọgide na ihuenyo anwụrụ ọkụ, ọ ga-abụ ebe na-adịghị mma ọhụụ n'azụ ụlọ ọrụ na apụl bitten. Anyị na-eche ihu a na-aga n'ihu aghụghọ nke leaked data na nkwupụta ndị na-etinye ndị si na Cupertino na ihe ngosi nke ụgbọ ala ebubo na akara Manzanita.
Ugbu a CEO nke Daimler n'onwe ya, Dieter Zetsche, eletala ụlọ ọrụ Silicon Valley iji hụ ebe ọrụ ụgbọ ala dị iche iche ị nwere ike ịdị na-aga n'ihu. Nke bụ eziokwu bụ na n'enyeghị aha ụlọ ọrụ ọ bụla, o kwuola na ọ tụrụ ya n'anya nke ukwuu ịhụ ogo nke ọrụ ndị ọ nwere ike ịhụ.
Amabeghị ma ọ bụrụ na CEO nke Daimler, onye ọrụ German nke aha ya bụ Mercedes-Benz a ma ama, zutere Tim Cook, onye isi Apple. Ihe amara bụ na o kwuputala na ya agaala ụlọ ọrụ karịrị iri ise na Silicon Valley iji hụ ma enwere ọrụ metụtara ngalaba ụgbọ ala na hụ otu ụlọ ọrụ ndị ngalaba na ngalaba nke ụlọ ọrụ gị na-anọchi anya ya nwere ike isi nyere ọrụ ndị a aka.
O doro anya na Apple ga-enwerịrị ụdị nkwekọrịta ya na ụlọ ọrụ ụgbọ ala nke mere na ọ bụ ha, n'okpuru ntuziaka Apple, bụ ndị na-arụ akụkụ nke ụgbọ ala. echere ụgbọ ala Cupertino na Apple bụ onye na-edu ndú mgbe a bịara n'ọrụ gị.
Nke bụ eziokwu bụ na nleta nke CEO nke Daimler etinyela na edemede ahụ, ọzọ, na ọ bụ Apple n'onwe ya nọ na mkparịta ụka ha ọ bụkwa ya mere o ji gaa ịhụ ihe esi nri na Silicon Valley.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Dieter Zetsche na-ekwu maka ụgbọ ala Apple